Akpụkpọ ụkwụ ịgba egwu n'ùkwù na omenala gbakwunyere nha n'elu ikpo okwu osisi ịgba egwu akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ
Akpụkpọ ụkwụ ịgba egwu n'ùkwù na omenala gbakwunyere nha n'elu ikpo okwu osisi ịgba egwu akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ
Ogologo oke ikiri ụkwụ emere nke ọma: EU SIZE 34-47, US SIZE 4.5-13
Ihe: PU ma ọ bụ ezigbo akpụkpọ anụ ma ọ bụ PVC /… + Rubber / ABS….outsole, ma ọ bụ dị ka achọrọ.
LOGO:Anabatara akara ngosi ahaziri ahazi
Agba: Dị ka achọrọ ma ọ bụ ahaziri
Sample: ga-eziga gị maka ịlele tupu nnukwu ịtụ
Oge nlele: 5-7 ụbọchị mgbe ekwenyechara nkọwapụta niile
Njikwa ogo: siri ike, dịka achọrọ.Nweekwa ahụ iru ala.
Ogologo oge: dabere na ọnụọgụ na nkọwa.
Ịkwụ ụgwọ: A ga-akpakọrịta.Enwere ike ịkwụghachi ọnụ ego nlele.
Omenala akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị, anyị bụ ndị ọkachamara!
Omenala akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị abụghị naanị ọrụ enyere, XinziRain kamakwa bipụta akara ngosi ahaziri aha gị nke ị kpọrọ aha.Ịrụ ọrụ dị elu, mma kacha mma, nnyefe ngwa ngwa, mmepụta ihe anya, tụkwasị anyị obi na biko zitere anyị ozi gị ma ọ bụ ozi-e.
Nhazi akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị
Women akpụkpọ ụkwụ omenalaọrụ, ọtụtụ ihe na akpụkpọ ụkwụ ikiri ụkwụ nkwa.BestHandmade, omenala nnukwu nha ụmụ nwanyị akpụkpọ ụkwụ, gbakwunyere nha ma ọ bụ karịa akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị, ebe a ka anyị nọ!
Omenala super elu ikiri ụkwụ pole sance akpụkpọ ụkwụ ụtọ akpụkpọ ụkwụ Platform Round Toe Ankle Boots
Okwu ndị dị mkpa: akpụkpọ ụkwụ okporo osisi omenala, akpụkpọ ụkwụ ịgba egwu omenala, akpụkpọ ụkwụ na-atọ ụtọ, omenala elu ikiri ụkwụ
Edozi nsogbu: Nkasi obi, ANTI/SLIPPERRY/ Antiskid, kwụsiri ike, eyi uwe siri ike, enweghị isi.
Isi ihe omenala dị ka ndị a:
1.Designs: ị nwere ike ịkọrọ anyị echiche gị ma ọ bụ skatches siri ike, anyị nwere ike ime akpụkpọ ụkwụ dị ka foto gị si dị.
2.Materials: insole / outsole / ikiri ụkwụ ihe / mkpuchi: ihe ọ bụla ị nwere ike ịhọrọ: REAL LEATHER, PU, ​​Miroleather, jean / denim .... na agba.
Ụdị 3.Heel ma ọ bụ ọdịdị ikpo okwu, ee, anyị nwere ike ime nke ahụ maka imewe gị.
4.Logo: logo ọ bụla ebe ọ bụla na akpụkpọ ụkwụ: ire, outsole, elu, akụkụ......
5.Color / Size / Heel hight / straps / zippers ...
Anyị maara ihe ị na-eche, anyị na-achọ ime akpụkpọ ụkwụ kwesịrị ekwesị, ha kwesịrị ịja mma gị, anyị kwesịrị gị nhọrọ.Biko kpọtụrụ anyị online ọrụ Tina whatsapp:+86 15114060576
Nke gara aga: N'ogbe na omenala Women pole ịgba egwu akpụkpọ ụkwụ na doro anya rose ikpo okwu
Osote: Otu n'ime kacha ewu ewu maka ụlọ ọrụ ballet ballet ụlọ ọrụ ụmụ agbọghọ Cosplay Leotards na-enweghị aka Ballet Tutu Performance Wear Dress Ballet
omenala logo n'elu ikpo okwu spuare mkpịsị ụkwụ ngọngọ ikiri ụkwụ slid...
Criss Cross Peep Toe Platform Pink High Heels S...
N'ogbe plus size inyom akpụkpọ ụkwụ n'elu ikpo okwu warara ...
Akpụkpọ ụkwụ agba egwu paillet na-egbuke egbuke na ihe mgbapụ ...
Omenala Mesh Peep Toe Platform Chunky High Heel ...
Omenala nkwonkwo ụkwụ okpukpu abụọ eriri eriri Platform Stile...